Wufuud ay Kala Hogaaminayaan Wasiirka Arimaha Dibada Somaaliya iyo Wasiirka Arimaha Gudaha Kenya Ayaa Gaaray Dhadhaab(Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Wufuud ay Kala Hogaaminayaan Wasiirka Arimaha Dibada Somaaliya iyo Wasiirka Arimaha Gudaha Kenya Ayaa Gaaray Dhadhaab(Daawo Sawirada)
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya iyo danjiraha Soomaaliya u fadhiya magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya ayaa gaaray xerada Qaxootiga ee Dhababaab ee dalka Kenyya, halkaas oo la filayo inuu gaaro madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud.
Sidoo kale waxaa soo gaaray Dhadhaab wafdi ka socda dowladda Kenya oo uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha iyo xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Kenya.
Wafuuddan ayaa horudhac u ah wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliya oo maanta ku wajahan xeryaha qaxootiga Dhahdhaab oo ay ku jiraan Soomaali badan.
Wariyaha Wakaalada Wararka Soomaaliyeed ee SONNA Yuusuf Sheekh Ciise oo la socda wafdi gaaray Dhadhaab ayaa wuxuu soo sheegayaa in madaxweynaha iyo wasiirada hada gaaray halkaas ay soo arki doonaan xaalada Qaxootiga Soomaaliyeed ee mudada dheer ku jira xeryaha Qaxootiga.
Dowlada Kenya ayaa dhawaan shaacisay inay xireyso xeryaha Qaxootiga sidoo kalana dib loo soo celinayo dadka ku jira xeryahaas, iyadoo Kenya ay ku doodayso inay adkaynayso amaankeeda.
Dowlada Soomaaliya iyo Qaramada Midoobay ayaa si isku mid ah u sheegay inaysan suurta gal ahayn in si qasab ah lagu soo celiyo dadka Qaxootiga ah eek u jira xeryahaan.
Wariye Sagal salaad Cusmaan oo maanta lagu aasay Muqdisho
Madaxweyne Xasan Sheekh oo maanta booqanaya xerada qaxootiga Dhadhaab